30 Aayadaha Kitaabka Qudduuska ah ee Ku Saabsan Awoodda | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Aayadaha Baybalka 30 Aayado Baybalka Oo Ku Saabsan Xoog
30 Aayado Baybalka Oo Ku Saabsan Xoog
Dhammaanteen waxaan u baahan nahay xoog si aan u sii wadno. Mu’min ahaan, waxaad u baahan tahay xoogga Ilaah si aad uga dhigto nolosha. Waxaan soo ururiyey 30 aayadood oo Baybalka ku saabsan xoog. Aayadahan Baybalka ah waxay awood kuu siinayaan inaad ku korto xoogga Ruuxa Quduuska ah. Eebbe la'aanteed, waxba ma qaban karno, waxaan u baahan nahay xoog oo keliya sidii aan orod ugu socon lahayn orodka nolosha, waxaan ubaahanahay xoogga Ilaah si aan uga gudubno tijaabooyinka nolosha, markii Sayidku yahay xooggaaga, shaydaan ma kaa adkaan karo. Waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad akhrido, wax ka barato oo aad uga fiirsato aayadahan Kitaabka Qudduuska ah ee ku saabsan xoogga, u akhri naftaada illaa inta qayb ka mid ah noloshaadu noqoneyso. Weligaa kuma daali doontid magaca Ciise.
1. Ishacyaah 41:10:
Ha cabsan; Ha cabsanina, waayo, waan kula jiraa, waayo, anigu waxaan ahay Ilaahaaga. Haah, waan ku caawin doonaa; Haah, oo waxaan kugu dhawri doonaa midigtayda midigtayda.
2. Ishacyaah 40:31:
31 Laakiinse kuwa Rabbiga isku halleeyaa xoog cusub bay heli doonaan. Waxay u soo fidi doonaan baalal sida gorgorka oo kale, Way carari doonaan, mana daalin doonaan. Way socon doonaan, mana daali doonaan.
3. Sabuurradii 73: 26:
26 Jiidhkayga iyo qalbigayguba waa itaal darnaadeen, Laakiinse Ilaah wuxuu weligiis ii yahay xooggii qalbigayga iyo qaybtayda.
4. Filiboy 4:13:
5. Ishacyaah 40:29:
Isagu kuwa itaalka daran xoog buu siiyaa; oo kuwa itaalka daranna xoog buu u kordhiyaa.
6. 2 Korintos 12:10:
10 Sidaas daraaddeed waxaan ku faraxsanahay itaaldarrooyin, iyo cay, iyo baahi, iyo silec, iyo dhibaatooyin Masiix aawadiis, waayo, markaan itaal daranahay, ayaan xoog badnahay.
7. 2 Timoteyos 1:7:
7 oo raba inaan noqdo macallimiinta sharciga; fahmidna waxay leeyihiin iyo waxay cadeynayaan.
8. 2 Tesaloniika 3: 3:
9. 1 Taariikhdii 16:11:
Rabbiga doondoona xooggiisa, oo had iyo goor doondoona wejigiisa.
10. Sabuurradii 18: 1-2:
1 Sayidow, xooggaygiiyow, anigu waan ku jeclahay. 2 Rabbigu waa dhagax weyn oo ii gabbaad ah iyo qalcaddayda, iyo samatabbixiyahayga, Ilaahayow, xooggayga aan isku halleeyo; Isagu waa magangalkayga, iyo geeska badbaadadayda, iyo munaaraddayda dheer.
11. 1 Korintos 16:13:
12. Sabuurradii 59: 16:
16 Laakiinse anigu waxaan ka gabyi doonaa xooggaaga, Haah, oo aroortii ayaan naxariistaada aad uga gabyi doonaa, Waayo, waxaad ahayd qalcaddaydii, Oo maalintii aan dhibaataysnaana magangal baad ii ahayd.
17 Sayidow, Rabbow Ilaahow! Bal eeg, samada iyo dhulkaba xooggaaga badan iyo gacantaada fidsan ayaad ku samaysay, oo wax kugu adagna ma jiro.
14. Xabaquuq 3:19:
19 Sayidka Rabbiga ah ayaa xoog ii ah, Cagahaygana wuxuu ka dhigi doonaa sida cagaha deerada, Oo wuxuu igu socodsiin doonaa meelahayga sarsare. Tan waxaa lagu tiriyey madaxdii muusikaystayaasha, oo lagu dhawaaqayo xadhkaygay.
15. Efesos 6:10:
Ugu dambaysta, walaalahayow, xoog ku sameeya xagga Rabbiga, iyo xooggiisa aan waxtar lahayn.
16. Cibraaniyada 4: 12:
12 Waayo, ereygii Ilaah waa dhaqso badan yahay, wuuna xoog badan yahay, oo waa ka af badan yahay seef kasta oo laba af leh, isagoo wadata qaybi nafta iyo ruuxa, iyo kala-baxa iyo kalabaxa, iyo garashada fikradaha iyo waxyaalaha qalbiga ku jira.
17. 1 Taariikhdii 29:11:
18. Markos 12:30:
Waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan iyo xooggaaga oo dhan.
19. Efesos 3: 20-21:
20 Haddaba kan awooda inuu sameeyo wax aad iyo aad uga sii badan waxa aynu weyddiisanno ama ku fikirno oo dhan sida u yahay xoogga inaga dhex shaqeeya, isaga ammaanu ha ugu ahaato kiniisadda xagga Ciise Masiix isagoo leh weligiis iyo weligiis iyo weligiis. Aamiin.
20. Sekaryaah 4: 6:
21. Sabuurradii 28: 7:
7 Rabbigu waa xooggayga iyo gaashaankayga, Qalbigaygu isaguu isku halleeyey, oo waa lay caawiyey, Sidaas daraaddeed qalbigaygu aad iyo aad buu u farxaa, oo gabaygaygaan isaga ku ammaani doonaa.
22. 1 Korintos 1:18:
18 Waayo, iskutallaabta lagu qodbay waa u nacasnimo kuwa lumaya, innaguna xagga kuwa badbaadada waa xoogga Ilaah.
23. Sabuurradii 44: 3:
3 Waayo, iyagu dalka kuma hantiyin seeftooda, Oo cududdooduna ma ay badbaadin, Laakiinse midigtaada iyo cududdaada iyo nuurka wejigaaga ayaa badbaadshay iyaga, Maxaa yeelay, raalli baad ka ahayd iyaga.
24. Rooma 1:20:
20 Maxaa yeelay, waxyaalaha aan la arki karin oo ka muuqda abuurniinta dunida ayaa la muujiyey, oo waxaa la gartay waxyaalihii la sameeyey, xataa xooggiisa daa'imiska ah iyo ilaahnimadiisa, sidaa darteed iyagu waa cudurdaar la'aan.
25. Sabuurradii 18: 31:
31 Bal waa ayo Ilaaha aniga Rabbiga ah mooyaane? Oo bal yaa dhagax weyn ah, Ilaahayaga mooyaane?
26. Kolosay 2: 9-10:
9 Maxaa yeelay, buuxnaanta Ilaahnimada oo dhammu waxay ku jirtaa isaga xagga jidhka. 10 Oo waa laydin buuxiyey idinkoo ku jira isagoo ah madaxa taaliye kasta iyo amar kasta.
27. Ayuub 37:23:
23 Annagu ma heli karno Ilaaha Qaadirka ah, waayo, isagu wuu xoog badan yahay; Oo garsoorid iyo caddaalad badan buu leeyahay.
28. 1 Taariikhdii 29:12:
12 Oo maal iyo sharafuba xaggaagay ka yimaadaan, oo wax kasta adigaa u taliya. oo gacantaadana waxaa ku jira xoog iyo itaal. oo gacantaadana waxaa ku jira xoog badan oo dadka oo dhan xoog siiya.
29. Wacdiyaha 4: 12:
12 Oo haddii nin ka adkaado laba nin baa is-hor taagi doona. Xadhig saddex laab ah si dhakhso ah looma jebiyo.
30. Sabuurradii 29: 11:
11 Rabbigu dadkiisuu xoogayn doonaa, Oo Rabbigu nabad buu dadkiisa ku barakayn doonaa. Rabbigu dadkiisuu nabadayn doonaa.
article Previous50 Aayado Baybalka oo ku saabsan nolosha
Next article20 Aayadaha Kitaabka Qudduuska ah ee Ku Saabsan Dhageysiga Carruurta
Salaada ka dhanka ah galmoodka riyada
20 Aayadood oo Baybalka ah oo ku saabsan ballamaha Ilaah
U ducee waddanka CAMEROON